People Work Group - Nepal
हामी सँग आबद्ध हुनुहोस र
यूरोप मा काम गर्ने सुनौलो अवसर पाउनुहोस ।
कामहरू खोज्नुहोस् हाम्रो बारेमा पढ्नुहोस्
विवरणहरू हेर्न कृपया शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस्।
कृपया निम्न कार्यहरूको सबै विवरणहरू हेर्न शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस्।
Production facility cleaner
Housekeeper in 4* hotel
सबै रोजगारहरू हेर्नुहोस्
सबै विवरणहरू हेर्न शीर्षकमा क्लिक गर्नुहोस्।
Iron specialist (locksmith)
पिपल वोर्क ग्रुप नेपाल
तपाईंको र तपाईंको उत्कृष्ट क्यारियरको लागि।
पिपल वोर्क ग्रुप नेपाल एक आउटसोर्सिंग कम्पनी हो जुन मानव पूंजी प्रबंधन संग काम गर्दछ र मानव संसाधन को क्षेत्र मा सेवाहरु र समाधान प्रदान गर्दछ।
हामी विशेषज्ञहरु को एक टोली हो जसको लागी कर्मचारियों र नियोक्ताहरु द्वारा भर्ती कुनै पनि भर्ती चलनंगहरु लाई लिन को लागी तैयार छ। दैनिक काम मा हाम्रो मिशन को कार्यान्वयन हुन्छ जब व्यापक रूप देखि विकसित एचआर समाधान र हाम्रो क्लाइंट मा आज को कर्मचारी कमी को पूरा को सफलता।
हामी ईमानदारीपूर्वक र आदरको साथ व्यवहार गर्दछौं। हाम्रो मानहरूले पोलिश कम्पनीहरुको कर्मचारी वफादारी र सन्तुष्टिको निर्माण गर्दछ, हामी आकर्षक काम स्थान खोज्छौं, हामी हाम्रो अनुभव विस्तार गर्दछौं र व्यावसायिक विकासको समर्थन गर्दछौं। हामी सहयोगको उच्च गुणस्तर र सेवाको गुणस्तरको जिम्मेवारी लिन सक्छौं।
हामी के प्रदान गर्छौं?
हामी तपाईंको लागि सबै आधारभूत चीजहरू प्रदान गर्दछौँ।
समय मै तलब
नि: शुल्क आवास र वर्दी
कानुनी तरिका ले रोजगार
सबै काम हरु मा निशुल्क खाना
हामी सँग आबद्द देश्हरु
हामी छवटा देशहरूमा छौँ, र हामी अझै पनि अन्य देशहरूमा हाम्रो पहुँच विस्तार गर्दैछौं।
हाम्रो प्रशोधन चरणहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
रिक्त पदहरूको चयन
कामको लागि दर्ता
पोल्याण्ड बारे थप जानकारी प्राप्त गर्न हाम्रो ब्लगहरू र समाचार पढ्नुहोस्।
ब्लग यूरोपमा जाने सबै भन्दा तेज तरिका कुन हो?
यदि तपाईं विदेशमा काम गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईलाई हाम्रो कम्पनीको छनौट गर्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईको आवश्यकताहरु लाई विशेष बनाइएको छ। ...
ब्लग वारसा, पोल्याण्ड भ्रमण गर्ने कारणहरू
केट र विल्स पोलिश राजधानीको सेन्ट्रम स्टेसनबाट उर्जा गर्न थाल्नु भयो, पहिलो स्थानमा जुन उनीहरूले उत्तीर्ण गरे त्यो स्टलिनिस्ट बेथमाथी हुनेछ। ...
ब्लग किन हामीले काम गर्न पोल्याण्ड रोज्नु पर्छ?
यो युरोपको सबैभन्दा अधीनस्थ देश मध्ये एक हुन सक्छ! यो कसरी एक राम्रो तरिकाले गोपनीय गोप्य छ जब प्रत्येक शहर अर्को भन्दा सुन्दर छ?
अन्य कार्यकर्ताबाट भिडियो सन्देश।
यहाँ केहि प्रश्नहरू छन् जुन निर्णय गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
arrow_drop_downके पोल्याण्डमा जान सुरक्षित छ?
पोल्याण्ड संसारको सबैभन्दा सुरक्षित देश हो, त्यसैले तपाईलाई खतराको बारेमा चिन्ता पर्दैन।
arrow_drop_downहामी "पिपल वोर्क ग्रुप" कम्पनीमा कसरी भरोसा गर्न सक्छौं?
तपाईं "पिपल वोर्क ग्रुप" मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ किनभने पोल्याण्डमा यसको प्रतिष्ठित आउटसोर्सिंग कम्पनी र सबै काम गर्ने व्यक्ति सबैसँग सन्तुष्ट छन्। साथै हामी नेपालमा प्रत्यक्ष शाखा कम्पनी हो र हामी सीधा सौदा गर्छौं।
arrow_drop_downनेपालबाट पोल्याण्डबाट प्याकेज प्याकेजमा समावेश छ?
होइन। कम्पनीले पोल्याण्डमा एक उडान टिकट खरीद गर्न मद्दत गर्दछ र हाम्रो भर्ती विशेषज्ञले यस व्यक्तिलाई एयरपोर्टमा सहयोग पुर्याउँछ।
arrow_drop_downके तपाईं मानवशक्ति वा एजेन्सी हुनुहुन्छ?
हामी मानवशक्ति र एजेन्सी होइनौं, हामी ठूलो आउटसोर्सिंग कम्पनी र सीधा नियोक्ताको रूपमा छौं।
arrow_drop_downके तपाईं हाम्रो भलाइ र राम्रो काम त्यहाँ पोल्याण्ड मा पुरा तरिकाले रहन को लागी चिन्ता हुनेछ वा छैन?
हो, हामी चिन्तित हुनेछौं, जब तपाईं त्यहाँ कामको लागि जानुहुन्छ, तपाईं हाम्रो साथ सम्पर्कमा रहनु भएको बेला पोल्याण्डमा काम नगरेसम्म, तपाई त्यहाँ त्यहाँ हाम्रा कम्पनीहरूसँग लिङ्क हुनेछन्। तपाईंको भलाइ निश्चितको लागि हाम्रो चिन्ता हुनेछ।
arrow_drop_downतपाईं किन फोनमा विवरणहरू भन्न सक्नुहुन्न?
किनभने हामी मानिसहरूको भरोसा पाउन आवश्यक छ र यो कम्पनीको नीति हो।
arrow_drop_downके आवास र खाना खाने कम्पनीले प्रदान गर्नेछ?
हो, सबै रिक्त पदहरूमा उल्लेखित रूपमा, आवास, भोजन र वर्दी कम्पनी द्वारा प्रदान गरिनेछ। तपाईं यसको लागि तिर्नुपर्ने छैन।
arrow_drop_downतलब भनेको जती नै पाउछ को पाउदैन ?
हो, रिक्तैमा वेतनको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। थप्न, कम्पनीको नीति परिवर्तन हुन सक्छ र तपाईं निर्दिष्ट भन्दा बढी वेतन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
arrow_drop_downके हामी त्यो योग्य छैन र कुनै पनि बारेमा धेरै ज्ञान छैन भने सरकारले हामीलाई स्वीकार गर्नेछ?
हो, निस्सन्देह। गत3वर्षको अवधिमा धेरै नेपालीहरू पोल्याण्डमा आउँछन्। सरकारले आवेदन गर्ने चाहने सबै आवेदन गर्ने 99.8% स्वीकार गर्नेछ।
arrow_drop_downजीवन बीमा किन स्वास्थ्य बीमाको साथ प्रदान गरिएको छैन?
हो, वास्तवमा नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी द्वारा स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सामाजिक बीमा र जीवन बीमा समावेश गर्दछ।
arrow_drop_downत्यहाँ पुगेपछि चिकित्सकीय नकारात्मक भने जिम्मेवार हुनेछ? कम्पनीले पहिले नै लागत उठाउनेछ वा हामीले गर्नु पर्छ? अथवा तपाईं हामीलाई फिर्ता नेपाल पठाउनुहुनेछ।
चिकित्सा खर्च र टीकाको बारे चिन्ता सबै कुरा कम्पनी द्वारा कवर गरिनेछ।
arrow_drop_downपोल्यान्ड जान जान लाग्दा हामी कति दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ?
भिसा प्राप्त गर्ने औसत समय3र4महिना बीचमा हुन्छ। तर यो4महिना भन्दा बढी हुनेछैन।
arrow_drop_downके कम्पनीले सबै कानूनी प्रक्रियाहरूको लागि पैसा प्राप्त गरेपछि एक स्वीकृति पत्र प्रदान गर्नेछ?
हो। तपाईंले "अनुमोदन भुक्तानी सम्झौता" प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंले सबै कानूनी प्रक्रियाहरूको लागि भुक्तानी गर्नुहुन्छ।
arrow_drop_downमेरो भिसाको म्याद समाप्त हुने बेलामा सुरु हुने बेला मैले के गर्न सक्छु?
यदि तपाइँ आफ्नो जागिर मनपर्छ भने, तपाइँसँग अर्को3वर्षको लागि पोलिस अस्थायी आवास कार्ड प्राप्त गर्न ठूलो मौका छ
arrow_drop_downके म भविष्यमा पोलिश नागरिकता पाउन सक्छु?
हो तिमि सक्छौ। यदि तपाईं यूरोपीय संघ नागरिकता प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँले6वर्षको अवधिमा पोल्याण्डमा काम गर्नुपर्छ। त्यसोभए, हामी पोलिश नागरिकता पाउनको लागी हामी लाग्न सक्छौं।
arrow_drop_downके हामी कामको लागि पोल्याण्डमा जान चाहन्छौं भने हामी भुक्तानीमा कुनै छुटकारा पाउनेछौं?
हो, यदि तपाईं4वा बढी व्यक्ति समूहको साथ पोल्याण्डमा जानुहुन्छ भने तपाईलाई राम्रो छूट पाउनुहुनेछ।
कृपया हामीलाई तपाईंको व्यक्तिगत विवरण यस फारमबाट पठाउनुहोस् र हामी तपाईंलाई सकेसम्म चाँडै सम्पर्क गर्नेछौं।
person पुरा नाम
call फोन नम्बर
हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ
तपाइँ तल दिएका कुनै पनि नम्बरलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईं केवल हाम्रो कार्यालय भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ।
पुतलीसड़क, शंकर देव परिसर को विपरीत
कापितल अस्पताल नजिकै
हाम्रो फेसबुक समूहमा सामेल हुनुहोस्
© 2018 पिपल वोर्क ग्रुप नेपाल हाम्रो नीति